चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीहरूले ‘तराई पहाड हिमाल मिलाउँछु’ भन्दै चलचित्र उत्पादनले ५३औँ वर्ष वीरगञ्जमा मनाएका छन् । महोत्सवका लागि १० लाख आइसी तिरेर भारतीय कलाकार गोविन्दालाई ल्याइएको थियो आफ्नै संस्थाले आयोजना गरेको सो कार्यक्रम महासचिवदेखि कार्यसमितिका अधिकांश सदस्यले बहिष्कार गरेका छन् । चलचित्र विकास बोर्डले १५ लाख, पर्यटन बोर्डले १५ लाख, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले १० लाख, प्रदेश सरकारले १० लाख, उद्योग वाणिज्य… विस्तृत समाचार
नेपाल टेलिभिजनलाई चुक्ता गर्नुपर्ने करोडौं बक्यौता तिर्नु नपर्ने, कलाकारको पैसा पनि दिनु नपर्ने । यसरी एकातिर कलाकारलाई उधारोमा, अर्काेतिर प्रसारण संस्था (नेपाल टेलिभिजनलाई) उधारोमा राखेर अरूलाई टाट पल्टाएर मोज गर्दै आएका सोम धितालले ज्योति काफ्ले, अशोक धितालहरूको उक्साहटमा लागेर आफूलाई छाडी गएका कलाकारविरुद्ध टेकु प्रहरीमा मुद्दा दर्ज गरी अन्त्यमा ब्याक भएका छन् । ‘मुद्दा हालियो अब छाडेर जाने कलाकार सिद्धिए’ भन्दै आएका धितालले कलाकारलाई लगाएको… विस्तृत समाचार
आफूलाई सिर्जनशील अराजक स्रष्टा भनेर चिनाउन चाहने राजन मुकारुङ पुनः बाउ बन्ने भएका छन् । उनी पन्ध्रौँ प्रेमिका अर्थात् सिङजाङ चेम्जोङको बच्चाको बाउ बन्ने भएका हुन् । केही वर्षअघिदेखि मुकारुङ र चेम्जोङ प्रेमसम्बन्धमा थिए । सोही कारण श्रीमती प्रगति राईसँग खटपट थियो । मुकारुङको जीवनमा कान्छी श्रीमती बनेर आएकी चेम्जोङ धरानकी हुन् । छोरी उमेरकी गर्भपतन गर्न दबाब दिए पनि चेम्जोङले अस्वीकार गरी अहिले काठमाडौं… विस्तृत समाचार
‘हाम्रो जोडीमा भाइरस लाग्यो त्यही भाइरसले हाम्रो दोस्ती खाइदियो ।’ हास्यकलाकार जितु नेपालसँग सम्बन्ध टुटेपछि दुःखी हुँदै दमन रूपाखेती भन्थे । त्यही भाइरसका कारण हो आज पनि दमन रूपाखेती र जितु नेपाल मन खोलेर बोल्दैनन् । त्यही भाइरसका कारण मन टुट्ने स्थितिमा पुगे चर्चित कलाकार सीताराम कट्टेल (धुर्मुस) र केदार घिमिरेबीच । यसरी कलाकार फुटाउने र राजनीति गर्ने ती भाइरस हुन् मिडिया हबका मालिक सोम… विस्तृत समाचार
नाच्न र गाउन विदेश गएका कलाकारबीच एयरपोर्टबाट शुरु भएको झगडाले सिने बजार तताएको छ । ढाडे बिरालो कन्याइदेऊ न बाईजस्ता विवादास्पद गीतको गायक हुन् प्रकाश कटुवाल । उनको यी तीज गीतमाथि नेपालका टेलिभिजनमा बन्देज लाग्यो । तिनै प्रकाश अर्काे लफडामा परेका छन् प्रियंका कार्कीसँग । तीजकै सन्दर्भमा अष्ट्रेलिया पुगेर फर्किएका उनीहरूबीच लफडा मच्चिएको हो । प्रकाशका अनुसार सामान बढी भएका कारण बोर्डिङ कार्ड नपाएर प्रियंका… विस्तृत समाचार
श्याम रिमाल राजा महेन्द्र २०१७ सालमा बेलायत जाँदा बोलाइएका लैनसिंह बाङ्देल तत्कालीन रोयल नेपाल एकेडेमीमा नियुक्त गरिए । उन्नाइस सालमा सरस्वती सदनमा एकल कला प्रदर्शनी पनि गरे । राणाहरूले रु. पाँच हजारमा कलाकृति खरीद गरिदिए । उनले सिकेको ज्ञान चेलाहरूलाई सिकाए । ती शिष्यशिष्या कोही चरामा लागे, कोही महिलाको मात्र चित्र बनाउन तिर लागे । कोही थांका, देवीदेवता, धर्मसंस्कृति, इतिहास, भूदृश्य, ग्राफिक, पदक डिजाइनमा ।… विस्तृत समाचार
चलचित्र विकास बोर्डको ध्यान अब म्युजिक भिडियो र विज्ञापनतिर केन्द्रित भएको छ । सञ्चार मन्त्रालयले तयार गरेको चलचित्र ऐन २०७६ को मस्यौदा केलाउँदा बेग्लै तस्बिर देखिन्छ । मस्यौदामा सांगीतिक भिडियो र विज्ञापन सामग्री सार्वजनिक गर्नुपूर्व सेन्सर अनिवार्य गरिएको छ । भिडियो र विज्ञापनलाई समेत चलचित्रको परिभाषाभित्र समेटिएको छ । यो मस्यौदाको बुँदा र दफाउपर चलचित्रकर्मीले आपत्ति प्रकट गर्न थालेका छन् । मस्यौदामा ‘जुनसुकै भाषा र… विस्तृत समाचार
एउटी सुन्दरीलाई पार्टीमा भिœयाउन पाएपछि रवीन्द्र मिश्र, किशोर थापा, डा. सूर्यराज आचार्यमा हर्षको सीमा छैन । सन् २०१८ की मिस नेपाल अर्थ २४ वर्षीया प्रिया सिग्देललाई साझा पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरिएको छ । ‘डेभलपमेण्ट स्टडिज’ मा स्नातक गरेकी प्रिंया हात्तीहात्ती नामक एनजिओका संस्थापक । कलाकार, मोडललाई पार्टीमा भिœयाएर कसैले पहाड फोडेको अभिमान नगर्दा हुने हो । हिजो लालुपाते नुग्यो भुइँतिर, कि लाऊ मायाँ उहीतिर… विस्तृत समाचार
कुनै समयका चर्चित नायिकाहरु पर्दाबाट हराएर होटल, बुटिक खोली त्यतै रमाउन थालेका छन् । कोही मम बेच्दैछन्, कोही चिया व्यापारमा मग्न छन् । जसरी फिल्मी पर्दाबाट हराएकी मौसमी मल्ल नवलपरासीको हात्तीखोरमा रिसोर्ट चलाएर जीवन धानिरहेकी छन्, उही ढंगले सिने बजारको विकल्प खोज्दैछन् नायिकाहरु । ०४५ सालमा बनेको ‘भाग्यरेखा’ देखि ०५५ सालसम्मका ७० वटा नेपाली फिल्ममा मुख्य अभिनेत्री रहेकी मौसमीझैं चलचित्रको विकल्पमा व्यवसाय रोज्ने अरु नायिकामा… विस्तृत समाचार
चौतर्फी दबाबपछि संगीत रोयल्टी समाजको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)को पदबाट मिनाक्षी कोइरालाले राजीनामा दिएकी छन् । अध्यक्ष महेश खड्काले कान्छी पत्नी मिनाक्षीसँग ६ वर्षअघि विवाह गरेका थिए । र, सुरेश अधिकारी अध्यक्ष हुँदै मिनाक्षीलाई जागिरे बनाएका थिए । सुरेशपछि महेश अध्यक्ष भए । एउटै संस्थामा श्रीमती सिइओ र श्रीमान अध्यक्ष भएको भन्दै आलोचना बढेको थियो । बोर्डको निर्णयबाट मिनाक्षीलाई हटाइएको हो । सुवास रेग्मी, महेश… विस्तृत समाचार